Jubbaland: Waan bogaadineynaa dadaallada dhexdhexaadinta ee Aqalka Sare - Halbeeg News
KISMAAYO (HALBEEG)- Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo dhaweysay dadaallada dhexdhexaadinta ah ee uu wado guddiga xallinta khilaafaadka ee golaha aqal sare.
Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo xalay warbaahinta kula hadlayay Kismaayo ayaa sheegay in maamulka Jubbaland uu si diirran usoo dhaweynayo dadaallada ay wadaan guddiga xallinta khilaafaadka ee ka socda golaha aqalka.
“Waxbaan isku qabannay kadibna waxaan u baahannay cid saddexaad oo nala aragta wixii aannu isku qabannay kadibna aqalkiina sharafta leh ayaa wafdi noo soo diray oo lagu eegayo qodobada uu is marin waagu ka taaganyahay” ayuu yiri Maxamuud oo intaa ku daray “Waannu aqbalnay dhexdhexaadintiinna hey’adaha dowladda ee is qabsaday, go’aanno ayaad soo saarteen wixii aad noola timideenna waannu soo dhaweynaynaa ayuu yiri Maxamuud.
Guddiga xallinta khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa muddooyinkii dambe ku howlanaa dadaallo ay isugu soo dhaweynayaan labada dhinac.
Dhawaan ayay ahayd markii uu guddigu soo saaray qodobbo ay ku sheegeen nuxurka tabashooyinka ay soo gudbiyeen maamul goboleedyada iyaga oo dowladda federaalka ahna ugu baaqay fulinta iyo ka jawaabista habboon ee tabashooyinkaasi.
Dhankiisa ra’isul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Kheyre oo u dhaga nuglaaday baaqa guddiga ayaa isna soo magacaabay guddi ka kooban 4 wasiir kuwaasoo xukuumaddu ay u xilsaartay in ay la shaqeeyaan guddiga xallinta khilaafaadka ee aqalka sare.
Soomaaliya oo Urdun uga qaybgaleysa Shir looga hadlayo argagixisada